जापानका यी कम सुनिने तर घुम्नु पर्ने अविश्वसनीय ५ प्राकृतिक ठाउँ | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Spot > जापानका यी कम सुनिने तर घुम्नु पर्ने अविश्वसनीय ५ प्राकृतिक ठाउँ
लामो भ्याकेसन कतै घुम्न नगई पुरा हुदैन भन्ने मान्यता छ। हाईकिङ्ग वा पहाडमा क्याम्पिंग, अथवा कुनै तालमा बसेर सनसेट हेर्ने केहि प्रकृति संग घुलमिल हुने तरिका हुन्। प्रकितिमा रुझ्न जस्तो आनन्द अरुकुनै लक्जरीमा हुदैन। कोलाहल, भिड बाट टाढा सुन्दर प्रकृतिको शान्त वातावरणमा रमाउनको मजा छुट्टै हुन्छ।
जापान टापुको देश भएर होला, यहाँ विस्वकै केहि सुन्दर हेर्न लायक ठाउहरु छन्। यी ठाउँहरु प्राकृति स्थल हेर्न मनपराउने हरुको लागि घुम्ने पर्ने ठाउ हो। धेरै पर्यटकहरु नाम कहलिएका ठाउमा मात्र जाने हुनाले थुप्रै सुन्दर ठाउ हेर्न पाउदैन। जापानी खाना संग रमाईरहनु भएका हजुरहरुको लागि आज यो लेखको मार्फत जापानका केहि सुन्दर तर कम सुनिने ठाउको ’boutमा बताउनेछु। के के हुन् त यी पाच ठाउ ?
१. केनरोकु गार्डेन (इशिकावा)
यो गार्डेनलाई जापानका तिन सुन्दर बगैचा मध्य एक मानिन्छ। यहाँ थप्रै किसिमका बिरुवा र फूलहरु छन्। संगसगै पुल, चिया बगैचा, अवलोकन गर्ने ठाउहरु पनि थुप्रै भएकोले यो ठाउ निकै रमाईलो छ।
यो बगैचा १६२० देखि १८४० को बीचमा माएदा समुदायले बनाएका हुन्। यहाँ सुन्दरता थप्न ताल, पोखरी पनि छन्। सबै भन्दा मजाको कुरा यहाँ कहिले जाने भनेर सोच्नु पर्दैन। यो बगैचाका रुखहरु आफ्नो रंग हरेक मौसम फेर्ने भएकाले, जुन सुकै मौसममा पनि यहाँको प्रकृतिको मनोरम आनन्द लिन सकिन्छ।
२. नारुसावा आईस केभ ( यामानाशी )
यामानाशी केनको सबै भन्दा हेर्न लायक ठाउँ पक्कै पनि फुजी सान हो। तर यो नारुसावा गुफा पनि उत्तिनै हेर्न लालायित बनाउने खालको छ। यो गुफा रियल लाईफ आईस किङ्गडम जस्तै छ। यहाँ भित्र बरफको सुन्दर नमुना देख्न सक्नु हुनेछ। यो गुफा १२ महिनानै बरफले जमेको हुन्छ।
यो गुफा फुजी सानको एउट ज्वालामुखी बिस्फोट भएर १००० वर्षअघि बनेको हो। यो गुफामा मानिसहरु घुम्न गइ रहने हुनाले मानिसलाई सजिलो हुने हिसाबले हल्का कामहरु गरिएको छ। तर गुफाको प्राकृतिक बनोटलाई परिमार्जित गरिएको छैन। त्यसैले यो गुफा भित्र सम्म जान चाहनेहरुले पक्कै पनि आफुलाई शारीरिक तयार पर्नु पर्ने हुनेछ।
यो गुफाको यात्रा ३० मिनेटको जति भएता पनि हजुरले भरपुर आनन्द लिनु हुनेछ। जिउ बंग्याउन र तनकाउन भने पक्कै तयार रहनु होस्।
३. आकियोशी चुन ढुंगा गुफा (यामागुची)
यो अर्को निकै पपुलर गुफा हो। आकियोशी गुफा जापानकै सबै भन्दा ठुलो चुन ढुंगा गुफा हो। यो गुफा ९ किलोमिटर लामो छ। तर आम पर्यटक र पब्लिकले भने यो गुफाको सुरुवाती १ किलोमिटरमात्र यात्रा गर्न मिल्छ। १ किलोमीटर मात्र जना मिले पनि त्यो छोटो यात्रामा हजुरले प्रकृतिको बेग्लै वासना पाउनु हुनेछ। यो गुफामा ६ प्रजातिको चमेरा छन्।
यो गुफा आफ्नो अचम्मको बनोटको लागि जनिन्छा। यो गुफाको यस्तो बिचित्रको बनोट पानीले वर्षौ काटेर बनाएको भनिन्छ। यहाँ भएको १०० प्लेट भनिने धान खेत जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरि चुन ढुंगाको ताल पनि हेर्न लायक ठाउँ हो।
४. बेप्पू चिनोइके जिगोकु (ओइता)
यो तातो पानीको मूल हो। तर ध्यान पुर्यानुहोस यो पोखरीमा नुहाउन मिल्दैन। चिनोइके जिगोकुको अर्थ (bloody hell pond) हो। यहाँको पानी 78 डिग्री सेल्सिअस हुन्छ। यो तापक्रम नुहाउनको लागि बिल्कुल्नै ठिक होइन।नुहाउन नमिले पनि यो ठाउँ आफ्नो बनोट र रंगको लागि जापानमा पपुलर छ। यो पोखरीको पिध आइरन अक्साईडले भरिपूर्ण छ। येही कारणले गर्दा यो पोखरीको रंग रातो छ।
५. ताकाचिहो जर्ज (मियाजाकी)
यो गोकासे खोलाले काटिएको गहिरो छागो हो। यो पनि ज्वालामुखीको बिस्फोटले बनेको हो। छागोको साइडमा १७ मिटर लामो झरना छ। यो झरनाको नाम मिनाईनोताकि हो। यो झरनाको ब्याकग्राउण्डमा हरियो जंगल भएकोले यो दृश्यले अझ लालायित बनाउछ। यो छागोको मजा लिने दुइ तरिका छ। एउटा तल पानीमा डुंगा चढेर लिन सकिन्छ। झरना र छागो राम्रो संग देखिने हुनाले तल बाट डुङ्गा चढी हेर्ने सल्लाह दिन्छौ। अर्को चाहि माथि को छागो संग संगै कुदिएको बाटो हो। यो बाटो करिब १ किलो मिटर लामो छ र ताकाचिहो मन्दिर सम्म पुग्दछ। गर्मि महिनामा यो ठाउँमा बेलुका १०:०० बजे सम्म बत्ति बल्दछ।
यो देशले जो कोहीलाई पनि आफु तिर सजिलै खिच्दछ। टेकनोलोजीमा अवस्यनै जापान सबै भन्दा अगाडी छ। तर प्राकृतिक सुन्दरतामा पनि जापान मन्त्र मुग्ध बनाउने खालको छ। यी ठाउ हरु जति घुम्दा पनि पुग्दैन। जति नै प्राकृतिक सुन्दरताको पारखी नभएता पनि यी ठाउहरु पक्कै घुम्नुहोस। अनि हामीलाई हजुरको मन परेको ठाउँ बताउनु होस्।
होकाईदो (北海道) प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको जापानको उत्तरी भूभागमा रहेको प्रान्त हो। होकाईदो संसारका केहि निकै सुन्दर निला तालको लागि पनि प्रशिद्ध छ। यी तालहरु हेर्नको लागि मात्रै भनेर पनि थुप्रै पर्यटकहरु होकाईदो जाने गर्दछन। यी तालहरु को बनोट निकै भिन्न हुने गरेको छ। आज हजुरहरुलाई होकाईदोमा रहेको तिन घुम्नै पर्ने तालहरुको जानकारी गराउने छु। १.…